शेष घले दम्पत्ति बने डलर अर्बपति, अष्ट्रेलियाका धनी सूची कहाँ छ उनीहरुको स्थान ? | NewsKarobar
गृहपृष्ठ शेष घले दम्पत्ति बने डलर अर्बपति, अष्ट्रेलियाका धनी सूची कहाँ छ उनीहरुको स्थान ?
शेष घले दम्पत्ति बने डलर अर्बपति, अष्ट्रेलियाका धनी सूची कहाँ छ उनीहरुको स्थान ?
फाेटाेः फाइनान्सियल रिभ्यु
गैरआवासीय नेपाली शेष घले र उनकी श्रीमती जमुना गुरुङ अष्ट्रेलियाका धनाढ्यहरुको यस बर्षको सूचीमा डलर अर्बपति बन्न सफल भएका छन् । बीआरडब्लु रीच लिष्टमा घले दम्पत्ति दुवैको सम्पत्ति १ अर्ब डलर नाघेको उल्लेख छ । बीआरडब्लु रीच लिष्टले धनीहरुको सूची प्रकाशन गर्दै आएको छ ।
घले दम्पत्तिको सम्पत्ति १ अर्ब १० करोड डलर पुगेको द अष्ट्रेलियन पत्रिकाले प्रकाशन गरेको सूचीमा छ । उनीहरुले यस बर्ष मात्र २३ करोड डलर सम्पत्ति बढाएका छन् । गत बर्ष उनीहरुको सम्पत्ति ८७ करोड ६० लाख डलर थियो । यसअघि पनि उनीहरु धनीको सूचीमा त थिए, तर डलर बिलेनियरमा थिएनन् । यस बर्ष भने डलर विलेनियरको सूचीमा प्रवेश पाएका छन् । नयाँ सूचीअनुसार अष्ट्रेलियाका धनाड्यहरुमध्ये शेष घले ८६औं नम्बरमा छन् भने उनकी श्रीमती जमुना गुरुङ ८५ औं नम्बरमा उक्लिएका छन् ।
शेष घले गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनकी पत्नी जमुना संघको गत निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा पराजित भएकी थिइन् । उनीहरुले अष्ट्रेलियाको मेलवर्नमा मेलवर्न इन्ष्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी चलाउँदै आएका छन् । उनीहरुले पछिल्लो समय रियलस्टेट कारोबारमा समेत हात हालेका छन् । उनीहरुलाई डलर विलेनियर बन्न यही ब्यवसायले सघाएको छ ।
घले दम्पत्तिको लगानी नेपालमा समेत विस्तार भएको छ । उनीहरुले काठमाडौंको ठमेलमा करिव १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर शेराटन काठमाण्डु होटल खोल्ने तयारी गरेका छन् ।
घले दम्पत्ति सन् १९९० को दशकमा बिद्यार्थीका रुपमा अष्ट्रेलिया पुगेका थियो । उनीहरुले करिव २ दशकमै ब्यवसायको साम्राज्य खडा गरेका छन् । यसै अबधिमा उनीहरु डलर विलेनियर बनेका छन् । नेपालबाट डलर अर्बपतिको सूचीमा ब्यवसायी विनोद चौधरीमात्र सूचीकृत छन् ।
पछिल्लाे - सुरक्षा भ्यानले गराएकाे दुर्घटनाकाे भिडियाे भाइरल, बल्ल बाेले चन्द (भिडियाेसहित)
अघिल्लाे - सरकारले सक्ने काम पनि गरेनः मोहन वैद्य